Iplastiki inobuthi | Ecobricks.org
Ama-molecule e-plastiki awahambelani nezinhlelo zethu zesintu
Benza i-estrogen engabangela ukukhubazeka kokuzalwa, umdlavuza kanye nezinye izifo ezishisayo
Lapho kushiswa, amapulasitiki akhipha ama-molecule ezinobuthi emoyeni
Lezi zimvukuzane ziwehla phansi emasimini nasemasimini
Ipulasitiki ihlambalaza i-ecosytems yethu yendawo
Amaplastiki yizinhlayiya zemvelo lapho engena endaweni ye-biosphere.
Amaplastiki ayenziwe ngamafutha-amakhemikhali. Lezi amakhemikhali azihambisani nezinto eziphilayo ezizungezile. Ucwaningo lwezesayensi lubonisa ukuthi amakhemikhali ayingxenye ayingozi – sikwazi lokhu uma sizwa iphunga epulasitiki. Ekugcineni, ama-plastiki asetshenziselwe ukushiswa, ashiswa noma alahliwe azokwehlisa amakhemikhali anobuthi. Ngokuhamba kwesikhathi, lapho lezi zimakhemikhali zingena ezweni, amanzi nomoya, zithathwa izitshalo nezilwane. Ngisho nezindawo zokulahla ezakhiwe yizona zisixazululo. Kungakhathaliseki ukuthi sekuyiminyaka eyishumi noma eyikhulu, lamakhemikhali ekugcineni azofika endaweni ye-biosphere futhi athinte iwebhu yendawo yokuphila.
Amaplastiki ahlaziyeka abe ama-molecule ayenobuthi abese efika kithi, abangela ukulimala.
Kunezindlela ezintathu eziyinhloko ama-plastiki ahlaziyayo: ngokushisa, ukuvezwa kwe-UV (ukukhanya kwelanga) nokungqubuzana. Ngokungafani nokudla okufakiwe noma iphepha, ama-plastiki awakhulumi kahle, abonisa isithombe-ahlaziye. Lokhu kusho ukuthi ama-plastiki asele iminyaka emasimini noma amanzi azophuka kancane kancane zibe izingcezu ezincane nezincane. Ekugcineni lezi zingcezu zincane kakhulu kangangokuthi zithandwa yizitshalo, izinhlanzi nezilwane esizidlayo.
Ososayensi bathole imiphumela emibi emzimbeni womuntu wamakhemikhali abhala ipulasitiki. Amakhemikhali afana ne-Biphenyl A namaPhalates manje avinjelwe emikhiqizweni ethile eMelika naseYurophu. Kodwa-ke, lezi zimakhemikhali ziyaqhubeka zisetshenziswa kakhulu ePhilippines nakwamanye amazwe ase-Asia. Ngisho namanani amancane kakhulu lawa makhemikhali anemiphumela emibi kubantu-okubangelwa ukudala ukungezwani, ukungalingani kwe-hormonal, umdlavuza kanye nokudla okunobuthi. Intsha iyingozi kakhulu.
I-Ecobricks yindlela eyodwa yokugibela futhi usebenzise ipulasitiki futhi uyivimbele ukuba ingcoliswe ilanga, ukushisa noma ukungqubuzana. Funda izizathu ezengeziwe ukuthi kungani i-Ecobricks isisombululo esijulile sepulasitiki.
Funda iphephandaba lesayensi mayelana nokuchithwa kwepulasitiki: Plastic Degradation and its environmental implications
Funda isihloko esanda kutholakala mayelana nomthelela womhlaba jikelele wokungcola kweplastiki: Guardian, A million bottles a minute
Ukulala kuze kufike
I-Ecobricks yisisombululo esijulile epulasitiki. I-Ecobricks nazo zonke izinhlelo zokusebenza kule sayithi ziyisisekelo sokuzala